Qaramada Midoobey oo loogu baaqay inay ku dhawaaqdo Maalinta Waxbarashada Nabadda Adduunka - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
September 22, 2021 Warar & Muuqaal, opinion 0
(Waxaa daabacay: InDepthNews. Sebtember 21, 2021)
Waxaa qoray Ambassador Anwarul K. Chowdhury
Hoos waxaa ku qoran qoraalka Khudbadda Muhiimka ah ee Danjire Anwarul K. Chowdhury, Ku-xigeenkii hore ee Xoghayaha Guud iyo Wakiilka Sare ee Qaramada Midoobay iyo Aasaasaha Dhaqdhaqaaqa Caalamiga ah ee Dhaqanka Nabadda (GMCoP), Shirkii Sannadlaha ahaa ee Maalintii Waxbarashada Nabadda oo ay soo qabanqaabiyeen Ururka Midnimada iyo Shabakadda Waxbarashada Nabadda.
NEW YORK (IDN) - Waxaan u mahadcelinayaa Bill McCarthy, Madaxweynaha iyo Aasaasaha Aasaaska Midnimada iyo Guddoomiyaha Shirweynahan Sannadlaha ah ee Waxbarashada Nabadda ee sannadlaha ah ee ugu horreeya iyo Shabakadda Waxbarashada Nabadda ee qabanqaabinta shirka iyada oo ujeeddadiisu tahay in Qaramada Midoobay ay ku dhawaaqdo Nabad Caalami ah Maalinta Waxbarashada. Waxaan aaminsanahay inay fiicnaan lahayd haddii loogu yeero Maalinta Waxbarashada Nabadda ee Caalamka.
Sharaf bay ii tahay in la igu martiqaado inaan ka hadlo shirka anigoo ah afhayeenka ugu horreeya ee khudbad ka jeedinaya mawduuc aad ugu dhow qalbigayga iyo qofnimadayda.
Sidaan marar badan sheegay, waayo -aragnimada noloshayda ayaa i bartay inaan qiimeeyo nabadda iyo sinnaanta oo ah qaybaha lagama maarmaanka u ah jiritaankeenna. Kuwani waxay sii daayaan xoogagga wanaagsan ee wanaagsan ee aad loogu baahan yahay horumarka aadanaha.
Nabaddu waxay lafdhabar u tahay jiritaanka aadanaha - wax kasta oo aan sameyno, wax kasta oo aan sheegno iyo fikir kasta oo aan leenahay, waxaa jira meel nabadeed. Ma aha inaan nabada ka soocno sidii wax gooni ah ama fog. Waxaa muhiim ah in la garwaaqsado in maqnaanshaha nabaddu ay qaaddo fursadaha aan u baahannahay si aan nafteenna u wanaajino, isu diyaarinno, si aan awood u yeelano inaan wajaho caqabadaha nolosheenna, shaqsi ahaan iyo wadajir ahaanba.
Muddo labaatan sano iyo badh ah, diiradaydu waxay ahayd horumarinta dhaqanka nabadda kaas oo ujeeddadiisu tahay in nabadda iyo rabshaduhu ka dhigaan qayb ka mid ah nafsaddeenna, shakhsiyaddeenna-qayb ka mid ah jiritaankeenna qof ahaan. Tanina waxay awood u siinaysaa nafteena inaan si wax ku ool ah wax ugu biirino sidii aan u keeni lahayn nabada gudaha iyo tan dibaddaba.
Kani waa udub-dhexaadka cabirka is-beddelka ee u-qareenkayga adduunka oo dhan iyo da 'kasta, iyada oo xoogga la saarayo haweenka, dhallinyarada iyo carruurta. Garashadaani waxay hadda noqotay mid aad ugu habboon dhexda militariga iyo millateriga sii kordhaya ee baabi'inaya meerahayaga iyo dadkeenna.
Shirweynaha Caalamiga ah ee Nabadda ee Maskaxda Ragga ayaa lagu qabtay Yamoussoukro, Côte d'Ivoire/Ivory Coast sannadkii 1989-kii oo ay soo qabanqaabisay UNESCO iyada oo ay hoggaaminaysay xikmad iyo firfircooni saaxibkayga qaaliga ah Federico Duqa Zaragoza, ka dibna Agaasimaha Guud ee UNESCO oo ku soo biiraya shirku sidoo kale isagoo ah af -hayeen muhiim ah. Waxay ahayd kulan taariikhi ah si kor loogu qaado oo astaan ​​looga dhigo fikradda dhaqanka nabadda ee loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo isbeddelka qiyamka iyo dabeecadaha.
13kii Sebtember 1999, 22 sano ka hor toddobaadkii hore, Qaramada Midoobey waxay oggolaatay Baaqa iyo Barnaamijka Waxqabadka ee Dhaqanka Nabadda, oo ah dukumenti taariikhi ah oo ka gudba xuduudaha, dhaqamada, bulshooyinka iyo ummadaha.
Sharaf bay ii ahayd inaan guddoomiyo wada-xaajoodkii muddada sagaalka bilood ahaa ee horseeday in Golaha Guud ee Qaramada Midoobay la ansixiyo dukumintigan taariikh-dejinta caadiga ah. Dukumentigaasi wuxuu caddeynayaa in dhaqanka nabada ku jira uu ka kooban yahay qiyam, habdhaqan iyo qaabab nololeed.
Dhinac muhiim ah oo ka mid ah farriinta lagama maarmaanka u ah sida ku cad dukumiintiyada Qaramada Midoobay ayaa si wax ku ool ah u caddaynaya in “dhaqanka nabaddu uu yahay geeddi -socod is -beddel shaqsiyeed, midaysan iyo mid…
Nuxurka dhaqanka nabaddu waa farriintiisa ka mid ahaanshaha loo dhan yahay iyo midnimada caalamka.
Waxaa aasaas u ah in la xusuusto in dhaqanka nabaddu u baahan yahay isbeddel quluubtayada, beddelidda maankeenna. Waxaa lagu dhex gelin karaa habab fudud oo lagu noolaado, beddelidda habdhaqankeenna, beddelidda sida aan isu leenahay, beddelidda sida aan ugu xirno midnimada aadanaha. Nuxurka dhaqanka nabaddu waa farriintiisa ka mid ahaanshaha loo dhan yahay iyo midnimada caalamka.
Ajendaha 2030 ee Horumarka Joogtada ah ee Qaramada Midoobey ee ahdaafta horumar waara (SDGs) lambarka 4.7 waxaa ka mid ah, kor u qaadista dhaqanka nabadda iyo rabshadaha la’aanta iyo sidoo kale dhalashada adduunka oo qayb ka ah aqoonta iyo xirfadaha loo baahan yahay si kor loogu qaado waarta horumarin.
Waxay sidoo kale ugu baaqaysaa beesha caalamka inay hubiso in dhammaan bartayaashu ay hantaan kuwa sannadka 2030. Iyadoo taas diiradda la saarayo, mowduuca Madasha Heerka Sare ee Qaramada Midoobay ee 2019 oo lagu xusayo sannad -guurada 20 -aad ee dhaqanka nabadda ee UN -ka ayaa ahaa “Dhaqanka ee Nabadda — Awood-siinta iyo Beddelidda Bini-aadamnimada ”oo ujeeddadeedu tahay ajendaha hore-u-eegista iyo dhiirrigelinta labaatan sano ee soo socda.
Hordhacdaydii daabacaaddii 2008 -dii "Waxbarashada Nabadda: Waddo loo maro Dhaqanka Nabadda", Waxaan qoray, “Sida Maria Montessori ay si habboon u qeexday, kuwa doonaya hab nololeed rabshad leh, u diyaari dadka dhallinyarada ah; laakiin kuwa, doonaya nabaddu waxay dayaceen carruurtooda yaryar iyo kuwa qaangaarka ah sidaasna uma awoodaan inay u abaabulaan nabadda. ”
UNICEF gudaheeda, waxbarashada nabadda ayaa si kooban loogu qeexay “geedi socodka kor u qaadista aqoonta, xirfadaha, dabeecadaha iyo qiyamka loo baahan yahay si loo helo isbeddel dabeecadeed oo u saamaxaya carruurta, dhallinta iyo dadka waaweyn inay ka hortagaan iskahorimaadka iyo rabshadaha, si cad iyo qaab dhismeedba; in khilaafka lagu xaliyo si nabad ah; iyo in la abuuro xaalado nabada ku habboon, ha ahaato mid dadka dhexdooda ah, koox koox ah, mid qaran ama mid caalami ah ”.
Waxbarashada nabaddu waxay u baahan tahay in laga aqbalo dhammaan qaybaha adduunka, dhammaan bulshooyinka iyo waddammada iyada oo ah qodob muhiim u ah abuurista dhaqanka nabadda.
Waxbarashada nabaddu waxay u baahan tahay in laga aqbalo dhammaan qaybaha adduunka, dhammaan bulshooyinka iyo waddammada iyada oo ah qodob muhiim u ah abuurista dhaqanka nabadda. Waxay u qalantaa waxbarasho aad u kala duwan- “mid aan ammaaneen dagaalka laakiin wax u bara nabadda, rabshadaha iyo iskaashiga caalamiga ah.” Waxay u baahan yihiin xirfado iyo aqoon ay ku abuuraan kuna kobciyaan nabadda naftooda shaqsiyeed iyo sidoo kale dunida ay ka tirsan yihiin.
Marna muhiim nooguma ahayn inaan wax ka baranno adduunka oo aan fahanno kala duwanaanshaheeda. Hawsha barbaarinta carruurta iyo dhallinyarada si ay u helaan hab aan dagaal ahayn ayaa ah muhimadda koowaad.
Dhammaan machadyada waxbarashadu waxay u baahan yihiin inay bixiyaan fursado u diyaariya ardayda kaliya maahan inay ku noolaadaan nolol dhammaystiran laakiin sidoo kale inay noqdaan mas'uuliyad, miyir qabta iyo waxsoosaarka muwaadiniinta adduunka. Si taas loo sameeyo, barayaashu waxay u baahan yihiin inay soo bandhigaan manhajyo dhammaystiran oo awood -siinaya kobcinta dhaqanka nabadda ee maskax kasta oo dhallinyaro ah.
Runtii, tan waa in si habboon loogu yeero “Waxbarashada muwaadinnimada adduunka”. Barashada caynkaas ah lama gaari karo iyada oo aan la helin ujeedo wanaagsan, joogtayn ah, iyo waxbarasho nabadeed oo nidaamsan oo horseedaysa jidka nabadda.
Haddii maskaxdeena loo ekeysiin karo kombiyuutar, markaa waxbarashadu waxay bixisaa software -ka si aan “dib ugu bilowno” ahmiyadeena iyo falalka ka fog rabshadaha, dhanka dhaqanka nabadda. Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda wuxuu sii waday inuu si macno leh wax ugu biiriyo hadafkan waana inuu helaa taageeradayada joogtada ah.
Haddii maskaxdeena loo ekeysiin karo kombiyuutar, markaa waxbarashadu waxay bixisaa software -ka si aan “dib ugu bilowno” ahmiyadeena iyo falalka ka fog rabshadaha, xagga dhaqanka nabadda. Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda ayaa sii waday inuu si wax ku ool ah uga qaybqaato hadafkan waana inuu helaa taageeradayada joogtada ah.
Tan darteed, waxaan aaminsanahay in carruurnimada hore ay fursad gaar ah siineyso inaan ku beero abuurka ka-guurista dhaqanka dagaalka iyo dhaqanka nabadda. Dhacdooyinka uu ilmuhu la kulmo noloshiisa hore noloshiisa, waxbarashadda uu ilmahani helo, iyo waxqabadka bulshada iyo fikirka dhaqan-bulsheed ee ilmuhu ku dhex milmay dhammaantood waxay gacan ka geystaan ​​sida qiyamka, dabeecadaha, caadooyinka, hab-dhaqanka, iyo qaababka nolosha horumariyo.
Waxaan u baahanahay inaan isticmaalno daaqadan fursadda ah si aan u abuurno astaamaha shaqsi kasta u baahan yahay si uu u noqdo wakiilo nabadeed iyo rabshad la'aan laga soo bilaabo noloshii hore.
Isagoo isku xiraya doorka shaqsiyaadka ujeedooyin ballaaran oo caalami ah, Dr. Martin Luther King Junior wuxuu xaqiijiyey in “Shakhsigu uusan bilaabin inuu noolaado ilaa uu ka kor mari karo xuduudaha cidhiidhiga ah ee welwelkiisa shaqsiyeed ee welwelka ballaaran ee dhammaan aadanaha.” Barnaamijka Waxqabadka Qaramada Midoobay ee Dhaqanka Nabadda ayaa ahmiyad gaar ah siiya dhinacan is-beddelka shaqsiga.
Xaaladdan oo kale, waxaan ku celinayaa in gaar ahaan haweenku ay kaalin weyn ku leeyihiin horumarinta dhaqanka nabadda ee bulshooyinkeenna ay rabshaduhu ka jiraan, taas oo keenaysa nabad waarta iyo dib-u-heshiisiin. Sinnaanta haweenku waxay ka dhigtaa meerahayaga mid ammaan ah oo sugan. Waxa aan aaminsanahay xoogayga in haddii haweenku aysan ku hawlan horumarinta dhaqanka nabadda oo leh heerar siman ragga, in nabad waarta ay naga sii baxeyso.
Waa inaan mar walba xusuusnaano nabad la’aan, horumarku ma suurtowdo, horumar la’aantiisna nabaddu lama gaadhi karo, laakiin dumar la’aan nabad iyo horumar toona lama malayn karo.
Shaqada nabaddu waa geedi socod joogto ah waxaanan ku qanacsanahay in dhaqanka nabaddu gabi ahaanba uu yahay gaadhiga ugu muhiimsan ee lagu xaqiijinayo himilooyinka iyo ujeeddooyinka Qaramada Midoobay qarnigii labaatanaad iyo kow.
Aan ku soo gunaanado anigoo dhammaantiin si aad ah ugu boorrinaya inaan u baahanahay inaan ku dhiirrigelino dhallinta inay naftooda noqdaan, inay dhisaan dabeecadooda, shaqsiyaddooda gaarka ah, taas oo ku duugan faham, dulqaad iyo ixtiraamka kala duwanaanshaha iyo wadajirka aadanaha intiisa kale .
Waxaan u baahanahay inaan taas gaarsiino dhalinyarada. Tani waa tan ugu yar ee aan samayn karno sida dadka waaweyn. Waa inaan sameynaa wax walba si aan ugu xoojinno dareenka dhabta ah, iyo awood -siinta noocan oo kale ah waxay ku sii jiri doontaa iyaga nolosha oo dhan. Taasi waa muhiimadda Dhaqanka Nabadda. Ma aha wax ku -meelgaar ah sida xallinta isku -dhac ka dhaca hal aag ama bulshooyinka dhexdooda iyada oo aan la beddelin lana xoojin dadka si ay u sii wadaan nabadda.
Na sii-haa, dhammaanteen-isku duubnaadaan dhaqanka nabadda wanaagga aadanaha, sii jiritaanka meeraheena iyo ka dhigidda adduunkeenna meel wanaagsan oo lagu noolaado.
"Argentina: Macallimiintu waxay hoggaamiyaan istaraatijiyad qaran oo loogu talagalay Waxbarashada Deegaanka ee Buuxda."
Qurbajoogta Nabadda inay saameyn ku yeeshaan dhaqanka nabadda wanaagsan
June 14, 2018 Research 0
Qurbajoogta Nabadda waa fikrado yar yar laakiin muhiim ah, dabeecado iyo ficillo saameyn togan ku leh dhaqanka nabadda wanaagsan. Cilmi-baaristaan ​​waxay baareysaa xaaladaha, dhaq-dhaqaaqayaasha nabadda, aragtida guud ee dadka iyo aragtiyaha tacliinta ee saameeya dhaqanka nabadda wanaagsan. [sii wad akhriska…]
Brazil: Khubarada waxay taageeraan Tababbarka Macallinka ee Dhaqanka Nabadda
June 23, 2018 Siyaasadda 0
Dhageysiga dadweynaha bishii Maarso 14, khubaradu waxay ku baaqeen siyaasadaha dadweynaha si loo tababaro macallimiinta si kor loogu qaado dhaqanka nabadda ee dugsiyada. [sii wad akhriska…]
September 19, 2016 Warar & Muuqaal, Siyaasadda 0